Puntland iyo Galmudug oo iska kaashanaya la dagaalanka Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Puntland iyo Galmudug oo iska kaashanaya la dagaalanka Al-Shabaab
Kulan ay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ku yeesheen Wasiirrada Amniga ee Maamullada Puntland iyo Galmudug ayay isku raaceen, in ay u midoobaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen kooxda Al-Shabaab oo dhibaato ku haysa dadka ku dhaqan deegaannada maamulladaas.
GAALKACYO, Soomaaliya - Kulanka Wasiirada ayaa lagu lafa guray in marka hore labada maamul ay dardar geliyaan howlgallada ka socda gobolka Mudug, isla-markaana Al-Shaabaab marka hore laga cirib tiro deegaannada ay kaga suganyihiin Gobolka Mudug.
Wasiirka Amniga Maamul Goboleedka Galmudug Axmed Macallin Fiqi ayaa sheegay in labada Maamul samaysanayaan iskaashi ku aaddan dhanka amniga, iyo in ay si wada jir ah ula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab, oo kusii xoogaysanaysa gudaha deegaanada labada maamul.
Dhankiisa Wasiirka Amniga maaamula Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan, ayaa xusay in maamulkiisa uu qayb ka noqonayo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab, islamarkaana aysan jirin cid ay kaga daba faylayaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo uu sheegay in ay cadow ku yihiin shacabka labada Maamul.
Al-shabaab ayaa dhowaanahaan ku sii xoogaysanaysay Gobolka Mudug oo ay deegaanno dhowr ah oo dhaca koonfurta la wareegeen, halka dagaallo xooggan oo u dhexeeya Ciidanka Dowladda Fedraalka oo kaashanaya kuwa Galmudug iyo Al-shabaab ay ka dheceen deegaanno ka tirsan Gobolka Mudug, oo ay ma mid yihiin Wisil, Bacaadwayne iyo deegaane kale.